आर‍आर‍ क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
प्रकासित मिति : २०७३ चैत्र ३, बिहीबार प्रकासित समय : ०८:२४
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी (आर.आर.) क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले चुनाव गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आरआर क्याम्पसमा अनेरास्ववियुका तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्यासी तपेन्द्रबहादुर शाहीले चुनावको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा राधिका खतिवडा, हरि फुँयाल, रमेश वडाल, महेश वर्तौला, टीकाबहादुर कुँवर र आर्जु कार्कीले बहस गरेका थिए ।
रिट परेको १० दिनपछि सर्वोच्चले बुधवार चुनाव गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत फागुन १८ गते त्रिविले तोकेको मितिमा स्ववियु चुनाव नभएपछि फागुन २३ गते चुनाव गर्ने मिति आर.आर. क्याम्पसले तोकेको थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताले रोक लगाएको भन्दै स्ववियु निर्वाचन स्थगित भएको थियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।